01/03/2018 - Page 5 sur 5 -
01/03/2018 admintriatra 0
Nandritra ny filankevitry ny minisitra farany teo no nisy ny didim-panjakana manaisotra ny filohan’ ny fitsarana an-tampony Ranary Robertson Rakotonavalona amin’ ny toerany, io izay fahefan’ ny mpanatanteraka tanteraka. Mazava tokoa ny voalazan’ ny lalàna …Tohiny
Nahaliana ny vahoakan’I Fort Dauphin ny fanazavana nomen’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina mikasika ny vina Fisandratana 2030. Tonga marobe izy ireo nihaino ny fanazavan’ny Filoha. Feno hipoka mihitsy ny kianja nandraisana ny Filoham-pirenena mivady tamin’izany. Porofo …Tohiny
Teratany malagasy iray indray no saron’ny mpitandro filaminana tatsy Maorisy, nahatratrarana « héroïne” milanja 259 gr mitentina 3.885.750 Rs (vola maorisiana) ny alatsinainy lasa teo. Nafenina tao anaty kapaoty (préservatif) tany amin’ny maha vehivavy azy …Tohiny
Minisitra Augustin Andriamananoro : Manao propagandin’i Andry Rajoelina